बन्ला त माघ सम्ममा नयां संविधान ? | Sima Pari
Home / Featured News / बन्ला त माघ सम्ममा नयां संविधान ?
बन्ला त माघ सम्ममा नयां संविधान ?
संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले २०७१ साल माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने गरि संविधानसभाको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ। माघ महिनामै राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत संविधानमा हस्ताक्षर गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रस्तावित कार्यतालिकामा उल्लेख छ। प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार २०७१ बैशाख १५ गतेसम्ममा संविधानसभामा रहेका सबै समितिका सभापतिहरूको चुनाउ गरिसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी संविधान अभिलेख तथा निर्क्योल समितिले जेठ मसान्तसम्ममा तत्कालिन संविधानसभाले संविधान निर्माणको लागि तयार गरेको दस्तावेज अध्ययन गरी समितिका बिषय र विवादित बिषय निर्क्यौल गरी सभामा पूर्ण वा आंशिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
यही समितिले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमति भएका बिषयहरू संवीधानसभाले मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ। त्यसपछि संविधानसभाले असहमति भएका बिषयहरू सहमति गर्न आवश्यक निर्देशन सहित संवैधानिक राजनीतिक मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ
कार्यतालिकाअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा संविधान राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानसभाभित्र रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू बीच मतभिन्नता रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने र बाहिर रहेका दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने उल्लेख छ। कार्तिक मसान्तसम्मा संविधानको पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइ जनताको राय प्रतिक्रियाको लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। त्यसपछि नागरिक सम्बन्ध सुझाव समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव लिने कार्ययोजना तयार गर्नेछ।
मंसिर महिनासम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि व्यापक सुनुवाई, गोष्ठी र अन्तरक्रिया गराइनेछ। व्याक सुनुवाई पछि पुस महिनासम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको राय बमोजिम परिमार्जन गरी संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश हुनेछ। विधेयक संविधानसभाका सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ।पेश भएको विधेयकमाथि पुस महिनाभर छलफल हुनेछ। माघ महिनासम्ममा छलफलपछि पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने र अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ।
Previous: नाई नभन्नु ल-२ अस्ट्रेलिया र नेपालमा एकै पटक रिलिज हुने
Next: कोरियामा नेपाली मृत भेटिए